Fantatsika rehetra fa vokatra marbra ny marbra. Betsaka ny fianakaviana mampiasa marbra amin'ny haingon-trano, ary ny marbra dia manana marbra voajanahary sy marbra faux. Tena mahazatra izy ireo. Ary na marbra artifisialy na marbra voajanahary dia samy manana ny tombony sy fatiantoka ananany.
Ny marbra artifisialy dia ny fampiasana ny macadam an'ny marbra voajanahary na granita mba hamenoana fitaovana, miaraka amin'ny simenitra, gesso ary ny resina polyester tsy miangona mba hametahana azy, ary amboarin'ny fikolokoloana, fikosoham-bolo ary ny famolahana.
Ny marbra voajanahary dia ny vatolampy metamorphic izay noforonin'ny fiakaran'ny maripana ambony sy ny tsindry ambony ao anaty kofehy.
Tombony sy fatiantoka marbra voajanahary sy marbra artifisialy.
Ny tombony amin'ny marbra voajanahary dia ny endrika haingon-trano haingo, mahatsapa tsara aorian'ny famolahana ary matanjaka ny hamafiny. Maniry ny fanoherana ny akanjo mihoatra ny scagliola, aza matahotra colouring. Ny fatiantoka marbra voajanahary dia ny hoe tsy afaka milamina izy ary ny voam-bary amin'ny teboka mampisaraka dia tsy afaka mifanaraka tanteraka. Marbra ary sarotra amboarina ny marbra voajanahary.
Ny tombony azo amin'ny marbra artifisialy dia loko isan-karazany. Ny fifandraisan'ny marbra dia tsy miharihary ka misy ny fahamendrehana matanjaka. Mora kokoa noho ny marbra voajanahary izy io. Ny marbra artifisialy dia fitaovana synthesie simika, kely ny hamafiny, mora voasarona ary voaloto .